မဟာဘုတ် စစ်တမ်းကွန်ပျူ ဗေဒသုခုမ
« # ဟူးရား မဟာကာလကြီး ဆိုတာ
# ကား ရောင်းမှာလား ၊ လဲ မှာလား »
# မဟာဘုတ် စစ်တမ်းPublished September 25, 2011 | By Dr.Tin Bo Bo	.
စာရေးသူလည်း ဟိန္ဒူ ၊ အနောက်တိုင်း ဗေဒင်ပညာ ရှေးကျမ်းဟောင်း တော်တော်များများကို ဖတ်ဘူးပါတယ်။ အင်္ဂ၀ိဇ္ဇာပညာမှာ သုံးတဲ့ “သူရဇ္ဇ၊ သောကြ၊ ဗုဒ္ဓ ၊ စနြေ္ဒာ ၊ သောရီ ၊ ဂုရု ၊ ဘောမ” ဆိုတဲ့ ဂြိုဟ်တွေကို ဆပွတ်အစီအစဉ်နဲ့ နေရာချထားတာကို ဟိန္ဒူ ရှေးဟောင်း ကျမ်းတွေမှာရော ၊ အနောက်တိုင်း နက္ခတ်ဗေဒင်ကျမ်း တွေမှာပါ တွေ့ဘူးပါတယ်။ ဒီကျမ်းတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အင်္ဂ၀ိဇ္ဇာပညာကို ဖော်ထုတ်ခဲ့တဲ့ “တောင်တွင်းအကျော် ခင်ကြီးဖျော်” မမွေးခင်က ကျမ်းတွေ ပါပါတယ်။ ဒါကြောင့် အင်္ဂ၀ိဇ္ဇာပညာဟာ ဟိန္ဒူ နက္ခတ်ဗေဒင်ပညာရဲ့ အဆွယ်အပွားဆိုရင် လက်ခံနိုင်စရာ ရှိပါတယ်။ ဒါတောင်မှ “အထက်တစ်လုံး ၊ အောက်တစ်လုံး” ဆပွတ်ရိုက်သွားတာကတော့ ဆရာတော် ခင်ကြီးဖျော်ရဲ့ ဆင့်ပွားတီထွင်မှု ဖြစ်လောက်စရာ ရှိပါတယ်။ နောက်ပြီး တစ်နာရီခွဲစီ ယူထားတဲ့ “အခါ (၈)ခါ ပိုင်းတဲ့မူ” ကလည်း မူရင်း ဟိန္ဒူကျမ်းတွေနဲ့ ကွာခြားပါတယ်။ သူတို့က “တစ်နာရီစီ ပိုင်းသွားတဲ့ မူ” ကို ယူထားကြတာဘဲ တွေ့ရတယ်ခင်ဗျ။ ဒါပေမယ့် ဘယ် ရှေးဟောင်း ဟိန္ဒူကျမ်း၊ ရှေးဟောင်း အနောက်တိုင်း ကျမ်းမှာမှ “မဟာဘုတ်” နဲ့ ဆင်တူတာ တစ်ခုမှ မတွေ့ဘူးပါ။ (ကျွန်တော် ဖတ်ဘူး မှတ်ဘူး သလောက်ပေါ့နော်)။ ဒီတော့ ပြောချင်တာက မဟာဘုတ်ဟာ မြန်မာ့ရိုးရာဗေဒင် ပညာစစ်စစ်ဖြစ်တယ် ဆိုတာ ပြောချင်တာပါဘဲ။ ဘယ်ပညာရှင် ကနေ ဘယ်ခေတ်လောက်မှာ စတင်တီထွင်ခဲ့တယ်ဆိုတာတော့ ခုချိန်ထိ မသိရသေးဘူးခင်ဗျ။ နောက်တစ်ခုက မဟာဘုတ်ပညာရဲ့ “အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်” ။ ဒီ ဆောင်းပါးမှာ ဒါလေးကို အဓိကထား ပြောချင်တာပါ။
မဟာဘုတ်ပညာဆိုတာ ဘာလဲ။ “မဟာ” ဆိုတာ “ကြီးကျယ်ခမ်းနားသော” ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဖြစ်ပြီး “ဘုတ်” ဆိုတာ “ဘူတ” ဓာတ်ကြီးလေးပါးကနေ လာတယ်တဲ့။ “ပထ၀ီ၊ အာပေါ၊ ၀ါယော ၊ တေဇော” ဆိုတဲ့ ဓာတ်ကြီး (၄)ပါးပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တော် တို့လက်ဆန်းဗေဒင် လေ့လာလိုက်စားသူတွေ အတော်များများဟာ “မဟာဘုတ်” ရဲ့ Defination ကို ဒီလိုဘဲ နားလည်ထားကြ ပါတယ်။ “ပထ၀ီ၊ အာပေါ၊ ၀ါယော ၊ တေဇော” ဆိုတဲ့ ဓာတ်ကြီး (၄)ပါး ကို အခြေပြု တွက်ချက်ရသော ပညာပေါ့ဗျာ။ မဟာဘုတ် စာအုပ်ပေါင်းများစွာကလည်း ဒီလိုဘဲ ရေးထားကြပါတယ်။
ဒီကြားထဲ ရှိသေးတယ်။ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ မဟာဘုတ်ကို Buddhist Astrology တဲ့။ လုပ်ချလိုက်ပုံက။ နိုင်ငံခြားသားတွေကို ဉာဏ်ပညာ သိပ် ကြီးကျယ်တယ်လို့ချည်း မထင်လေနဲ့။ သူတို့လည်း ထင်ရာ မြင်ရာ လျှောက်ပြောတတ် ကြတာပါဘဲ။ Buddhist Astrology ဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာ အင်မတန် နူးညံ့သိမ်မွေ့နက်ရှိုင်းတဲ့ ဗုဒ္ဓရဲ့ ဖီလိုဆိုဖီ ကို သို့လော၊ သို့လော ထင်ရောင်ထင်မှား ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ စကားလုံးပါ။ လုံးဝ မသုံးစွဲသင့်တဲ့ စကားလုံးပါနော်။
အဓိက တရားခံကတော့ တန်ခိုးကြီး စေတီဘုရားတွေပေါ်မှာ ရှိတဲ့ “ဂြိုဟ်တိုင်” တွေဘဲဗျ။ မြန်မာ့ဗေဒင် ပညာကို နည်းနည်းပါးပါး တီးမိခေါက်မိရှိတဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေရဲ့ အမြင်မှာ ဘုရားရှေ့ကဂြိုဟ်တိုင်တွေမှာ ယတြာချေ နေကြတာ မြင်တော့ “ဘုရား နဲ့ ဗေဒင်ပညာ” ကို ပေါင်းစပ်လိုက်ပြီး Buddhist Astrology ဆိုတဲ့ အမည်နာမ ထွက်ပေါ်လာတယ်နဲ့ တူပါတယ်ဗျာ။
ဟုတ်ပြီ။ နိုင်ငံခြားသားတွေ မှားတာက ထားဦး။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုး ဗေဒင်ပညာရှင်တွေကရော။ အထက်က ပြောခဲ့တဲ့ အတိုင်း “မဟာဘုတ်” ဟာ “မဟာဘူတ ဓာတ်ကြီးလေးပါး” နဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ ပညာဆိုတာ ဟုတ်ရဲ့လား ? ။ ကျွန်တော်တို့ ပြန်ပြီး စဉ်းစားသင့်တယ်။ ကျွန်တော့ မိတ်တွေတွေထဲမှာ (ဗေဒင်ပညာရှင် မဟုတ်တဲ့) အသိအကျွမ်း ဦးလေးကြီးတစ်ယောက် ရှိပါတယ်။ နာမည်က “ဦးသောင်းတင်” လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒီ ဦးလေးကြီးက တစ်နေ့မှာ ကျွန်တော့်ကို မဟာဘုတ် ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုံးနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးခွန်းတစ်ခု ထုတ်သွားဘူးပါတယ်။
သူ့အပြောက “ဆရာဗိုလ်ရေ ၊ ကျွန်တော့် ယူဆချက်ကတော့ မဟာဘုတ်ဆိုတာ ဓာတ်ကြီးလေးပါးကို ပြောတာမဟုတ်ဘဲ ၊ “ဆိုင်းဘုတ်” ၊ “ဘုတ်တိုင်” စတဲ့ အသုံးအနှုံးတွေမှာ ပါတဲ့ “ဘုတ်တိုင်” ကို ပြောတာလို့ ယူဆချင်တယ် တဲ့။ ဆရာတို့ မဟာဘုတ် ထူရင် အရင်ဆုံး တိုင်လေး နှစ်ချောင်းထောင် ၊ ပြီးရင် တန်းလေး နှစ်တန်းပစ် ပြီး “တိုင် စ, ပြီး ထူလိုက်တာ” မဟုတ်လား တဲ့။ ပြီးမှ “အောင်၊ လံ၊ ထူ၊ စစ်၊ သူ၊ ကြီး၊ ပွဲ” ဆိုပြီး ဂဏန်းတွေ လိုက်ချတာ မဟုတ်လား တဲ့။ ဒီတော့ ဆိုင်းဘုတ်ထူလိုက်ပြီး စာတွေ လိုက်ရေးလိုက်တာ နဲ့ မတူပေဘူးလား တဲ့။ အင်း - ဂွတော့ ကျပြီ။ ဟိုက ဗေဒင်ပညာရှင် မဟုတ်တဲ့သူ။ ကိုယ်က ဗေဒင်ပညာရှင်လို့ ခံယူထားတဲ့သူ။ လွယ်လွယ်နဲ့ လက်ခံလိုက်ရင် ကိုယ်ညံ့ရာကျမယ်။ (ကျွန်တော့် စိတ်ထဲမှာ ဖြစ်နေတဲ့ အတွေးတွေပါ)။ ဒါကြောင့် ချေပဖို့ စကားလုံး ရှာကြည့်တော့ မြန်မာတွေ သုံးတဲ့ “ဆိုင်းဘုတ်” က “ဘုတ်” ဟာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာထဲက “Board” နဲ့ သွားတူနေတယ်။ ဒီတော့ ကျွန်တော်က ပြန်ပြီး ချေပတာပေါ့။
ဟာ - ဦးလေးကလည်း ၊ မြန်မာနိုင်ငံက အင်္ဂလိပ်လက်အောက်မှာ နှစ်ပေါင်း (၁၀၀)လောက် ကျွန်ဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့ တစ်ချို့စာလုံးတွေက အင်္ဂလိပ်ကနေ မြန်မာမှု ပြုထားတာ ရှိတယ်လေ။ “ဘောလုံး” တို့ ၊ “ဘက်ထရီအိုး” တို့ ရှိတယ်လေ။ “ဆိုင်းဘုတ်” ဆိုတာလည်း “Sign Board” ကနေ လာတာဖြစ်မှာပေါ့လို့ ချေပရတာပေါ့ဗျာ။
ဒီတော့ ဦးလေးကြီးက “မဟုတ်သေးဘူး ဆရာ။ “ဘုတ်” ဆိုတဲ့ စကားလုံးက မြန်မာ့စကားထဲမှာ အင်္ဂလိပ် မလာခင် ကတည်းက ရှိတာပါ။ ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်က “လိုက်တမ်း ပြေးတမ်း” ကစားတော့ “ဘုတ်တေး” ဆိုတဲ့ စကားကို ဆရာ သုံးဖူး မလား မသိဘူး။ “ဘုတ်တေး” လုပ်လိုက်ရင် လိုက်ဖမ်းတဲ့သူက ဆက်ဖမ်းလို့ မရတော့ဘူး။ “ဘုတ်” လုပ်လိုက်တယ် ဆိုတာက ရပ်နားလိုက်တာ၊ အခြေစိုက်လိုက်တာ၊ အခိုင်အမာ တည်ဆောက်လိုက်တာ ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်တွေ ပါနေတယ် ဆရာ။ စဉ်းစားကြည့်ပါ။ “မဟာဘုတ်” က “ဘုတ်” ဟာ ဒီသဘောဘဲလို့ ကျွန်တော် ယူဆတယ်ဆရာ။ ပြေးတမ်းလိုက်တမ်း ကစားနည်း က မြန်မာပြည်ကို အင်္ဂလိပ်မလာခင်ကတည်းက ရှိနေတဲ့ မြန်မာ့ရိုးရာ ကစားနည်း တစ်ခုပါ တဲ့။ ကျွန်တော်လည်း ဒီစကားကို ချက်ခြင်းကြီး လက်ခံလိုက်တာ မဟုတ်ပေမယ့် စဉ်းစားစရာတော့ ဖြစ်လာတယ်။ ဒီ ဦးလေးကြီး “ဦးသောင်းတင်” ဆိုတာကလည်း နှယ်နှယ်ရရ ပုဂ္ဂိုလ်တော့ မဟုတ်ဘူးနော်။ ယခင် အစိုးရ၀န်ကြီးဌာန တစ်ခုမှာ ညွှန်ကြားရေးမှူး လုပ်ဘူးသူဖြစ်ပြီး အင်္ဂလိပ်ဘာသာ နဲ့ ပြင်သစ်ဘာသာကို အလွန်ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်တယ်။ ဗေဒင်ပညာ မဟုတ်ပေမယ့် အဂ္ဂိရတ်ပညာ နဲ့ ဂမ္ဘီရ ပညာအချို့ကိုလည်း တီးမိ ခေါက်မိ ရှိသူဖြစ်တယ်။ ကိစ္စရပ်တစ်ခုကို လေးလေးနက်နက် သုံးသပ် ဆင်ခြင်တတ်တဲ့ ဉာဏ်မျိုးရှိသူဖြစ်တယ်။ ဦးလေးကြီး ပြန်သွားတော့ ကျွန်တော် ဒီကိစ္စကို ဆက်ပြီး စဉ်းစားဖြစ်တယ်။ လက်ဆန်းဗေဒင်ထဲမှာ “ပထ၀ီ၊ အာပေါ၊ ၀ါယော၊ တေဇော” ဆိုတဲ့ ဌာနတွေ ရှိပေမယ့် အဲဒါတွေက “မဟာဘုတ်ခွင်” ထဲမှာ မဟုတ်ဘဲ “အဌလဂ်ခွင်” မှာ ဖြစ်နေတယ်။ တကယ်တော့ အဌလဂ်ခွင်က မဟာဘုတ်တစ်ဦးတည်းပိုင် မဟုတ်ပါဘူး။ သုံးတန်ပေါ်နိစ် ကလည်း အဌလဂ်ခွင်ကို ပိုင်တာဘဲ။ ဆန်းဗေဒင်ကလည်း ပိုင်တာဘဲ။ အင်္ဂ၀ိဇ္ဇာကလည်း ဆိုင်တာပါဘဲ။ မဟာဘုတ် တစ်ဦးတည်းပိုင် မဟုတ်ပါဘူး။ မဟာဘုတ်ခွင်ထဲမှာတော့ “ပထ၀ီ၊ အာပေါ၊ ၀ါယော၊ တေဇော” ဆိုတဲ့ ဌာနတွေ မတွေ့မိဘူးဗျ (ကျွန်တော် စာဖတ်နည်းတယ် ထင်ရင်ခွင့်လွှတ်ပါ)။ မဟာဘုတ်ကသစ်အိမ် တွေဖြစ်တဲ့ “လှ၊ တော ၊ မြို့ ၊ သား ၊ အ ၊ ကြွား ၊ ဆင့်” ဆိုပြီး ရှိပေမယ့် မဟာဘုတ် (၇) အိမ်တွေမှာ - ပထ၀ီ အိမ် ၊ ၀ါယောအိမ် ၊ အာပေါအိမ် ၊ တေဇောအိမ် ရယ်လို့ သတ်မှတ်တာမျိုးတော့ မတွေ့ဘူးတာ အမှန်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ တရုတ်လူမျိုးတို့ရဲ့ အကောင် (၁၂)ကောင် ဗေဒင်မှာ “ကျား” နှစ်မှာ မွေးသူတစ်ဦး ဆိုပါစို့။ အဲဒီမှာ တရုတ် ဘုတ်ကြီး(၅)ပါးအရ “ရေကျား ၊ သစ်သားကျား ၊ မီးကျား ၊ သတ္တုကျား . . . စသည်ဖြင့် ခွဲခြားထားတာ ရှိပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ မဟာဘုတ်မှာ “သိုက်ဖွား” တစ်ဦးကို “ပထ၀ီ သိုက်ဖွား” “အာပေါ သိုက်ဖွား” . . . စသည်ဖြင့် ခွဲခြားထားတာ ၊ အဟောထုတ်တာရယ်လို့ မတွေ့ဘူးသေးဘူးခင်ဗျ။
နောက်ဆုံး အဌလဂ်ခွင်မှာတောင်မှ ဓာတ်ကြီး (၄)ပါး ရှိတယ်ဆိုပေမယ့် ဂြိုဟ်ခွင် သက်ရောက်အဟောတွေမှာ ဂြိုဟ်ရဲ့ ပရိယာယ်တွေကိုသာ အဓိကထားပြီး ဟောတာမျိုး တွေ့ရပြီး မီးဓာတ် အဟော ၊ ရေဓာတ် အဟော . . . စသည့်ဖြင့် ဟောတာမျိုး သိပ်မတွေ့ရပါဘူး။ တနင်္ဂနွေ သက်ရောက်ဆိုရင် “ ဖခင် ၊ အိုး ၊ အိမ် ၊ အလုပ်အကိုင် ၊ အကြီးအကဲ ၊ မင်္ဂလာကိစ္စ ” စသည်များနဲ့ ဆိုင်တဲ့ အဟောမျိုး ၊ တနင်္လာ သက်ရောက် ဆိုရင် “ မိခင် ၊ ငွေ ၊ ခြေနှစ်ချောင်း ၊ ယာဉ်ကား ” စသည်များနဲ့ ဆိုင်တဲ့ အဟော မျိုးတွေဘဲ ဟောကြ ပြောကြတာဘဲ တွေ့ဘူးပါတယ်။
ဒီလို ပြောနေတာဟာ “မဟာဘုတ်” ပညာကို သိက္ခာချလိုစိတ် ၊ “မဟာဘုတ်ပညာရှင်” တွေကို သိက္ခာချလို စိတ် အလျှဉ်း မရှိပါ။ ဒီသဘောနဲ့ ပြောနေတာ မဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် မဟာဘုတ်ကို အလွန်မြတ်နိုး တန်ဖိုးထားသူဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်လေ့လာလိုက်စားတဲ့ ပညာရပ် တစ်ခုရဲ့ အဓိပ္ပါယ် “ဇစ်မြစ်” ကိုတော့ တိတိကျကျ သိထားရင် ပိုကောင်းမယ် ထင်ပါတယ်။ ဖြစ်လည်း ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ ကျွန်တော့် အနေနဲ့က အခုစာရေးနေချိန်အထိ ဘယ်ဟာ အမှန်ဆိုတာ ပြတ်ပြတ်သားသား မခံယူနိုင်သေးပါ။ ဒါပေမယ့် ဦးလေးကြီး “ဦးသောင်းတင်” ရဲ့ စကားက ပိုဖြစ်နိုင်ချေ ရှိတယ်လို့တော့ ထင်နေပါတယ်။
ဒါကြောင့် “မဟာဘုတ်” ရဲ့ အနက်အဓိပ္ပါယ်ကို တိတိကျကျ ခိုင်ခိုင်မာမာ သိသူ ရှိလျှင် ကွန်းမန့်ထဲမှာ ၀င်ပြီး ရေးပေးဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် အထက်က အယူအဆ နှစ်ခုအပေါ်မှာ (ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မသိသော်လည်း) ဘယ်ဟာ ပိုဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ထင်မြင်ယူဆချက်မျိုးကိုလည်း လက်ခံပါတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် “မဟာဘုတ်ပညာ” ကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် အသုံးချနေသူဖြစ်ပေမယ့် ဒီလို အနက်အဓိပ္ပါယ်ကို တိတိကျကျ မပြောနိုင်သေးတာကို ကိုယ့်ကိုယ့်ကို ဘ၀င်မကျမိတာ အမှန်ပါ။ ဒါကြောင့် “မဟာဘုတ်” ပညာဟာ “မဟာဘူတ ဓာတ်ကြီးလေးပါး” လား ၊ “ကြီးကျယ်ခမ်းနားသော ဘုတ်တိုင်” လား ဆိုတာ ဝေဖန်ဆန်းစစ် ပေးကြပါခင်ဗျား။ .
ပညာရှင်များ အားလုံးသို့ မေတ္တာများစွာဖြင့်
Posted in မဟာဘုတ်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | Tagged MaHaBote, Mahakarlagyi, Myanmar Astrology, Myanmar Astrology 2011, myanmar horoscope, myanmar zodiac, မဟာကာလကြီး, မဟာဘုတ်, အင်္ဂ၀ိဇ္ဇာ, ဗေဒင်, မြန်မာ ဗေဒင်, မြန်မာ့ ရိုးရာဗေဒင်, မြန်မာ့ ဗေဒင်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်	14 comments on “# မဟာဘုတ် စစ်တမ်း”	khin shwe on September 25, 2011 at 2:47 pm said:
ဆရာ့လိုပညာရှင်တောင် ဝေခွဲရခက်နေသေးတဲ့ကိစ္စကို ကျမတို့လို ၀ါသနာရှင်တွေက ဝေဖန်ဆန်းစစ်ဖို့ ဉာဏ်မမှီနိုင်ပါဘူး။ ဆရာ ကိုယ်တိုင် တိတိကျကျအဖြေတခုရတဲ့အထိ ရှာဖွေပြီး ပြန်လည်မျှဝေ ပေးပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ ဒါဟာ တကယ်လဲ လိုအပ်တဲ့အဖြေပါ။ ဒီလိုအဓိပ္ပါယ်၊ဇစ်မြစ် တိတိကျကျသိထားရရင် (မဟာဘုတ် မဟုတ်ပါ)ဆိုပြီး မြန်မာ့လက်ဆန်းပညာကို နှိမ်ချပြောဆိုမူတွေနဲ့ ဆုံရတဲ့အခါ ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ပြန်လည်ချေပနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာ့ရဲ့ ပြန်လည်မျှဝေပညာပေးမူကို စောင့်မျှော်နေပါ့မယ်။
zin on September 25, 2011 at 4:18 pm said:
Dr.Tin Bo Bo on September 25, 2011 at 4:23 pm said:
ချေပတာ မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ့်ကို သိချင်လို့ပါ။ ကိုယ့်ဟာကိုယ်လည်း မဟာဘုတ် နဲ့ ဆရာလုပ်နေ ပြီး ဒါလေးမှ ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် မသိတာ ရှက်မိလို့ပါ။ ဆရာ့အနေနဲ့ ကိုယ်မသိတာကို မသိဘူးလို့ ပြောရမှာ လုံးဝ မရှက်ပါဘူး။ သိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး နေရာတာကို ပိုရှက်မိလို့ပါ။ တရားကတော့ သိပ်မလုပ် နိုင်သေးပါဘူး။ တရားဘက်ကို လုံးဝရောက်သွားရင်လည်း ဒီဘလော့ဂ် ရှိတော့မှာ မဟုတ်ဘူး။
zin on September 25, 2011 at 5:13 pm said:
ကူညီနိုင်ရင်ပိုမကောင်းဘူးလားဆိုပီးလည်းစင်းစားမိလို့ပါဆရာ။ Dr.Tin Bo Bo on September 25, 2011 at 6:40 pm said:
လေးလေးစားစား ဒုက္ခခံပြီး ကွန်းမန့်ဝင်ရေးပေးတာ ကျေးဇူးအထူး တင်ပါတယ်။ ဒီ ဦးလေးကြီးကတော့ ဒီလို လူစားမျိုး မဟုတ်ပါ။ သူနဲ့ သိကျွမ်းတာလည်း ကြာခဲ့ပါပြီ။ သူကလည်း အမှန်ကို ဖြစ်စေချင် ပုံရပါတယ်။ စိတ်ကောင်းရှိတဲ့သူရဲ့ စကားမို့ ဒီဆောင်းပါး ဖြစ်လာတာ ပေါ့။ စိတ်မကောင်းလူတစ်ယောက်ရဲ့ စကားဆိုရင် ဒီဆောင်းပါး ဖြစ်လာစရာ မရှိပါ။ ဆရာ့အပေါ် မှာလည်း အင်္ဂလိပ်ဘာသာ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အကူအညီ များစွာ ပေးခဲ့သူ/ပေးနေသူ တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာ့ဘက်ကနေ ယခုလို စဉ်းစားပေးတာကို ကျေးဇူးအထူးတင်လှပါတယ်။ ကျန်းမာချမ်းသာပါစေ။
ko on September 26, 2011 at 8:46 pm said:
ပျောက်ကွယ်လုနီးပါး အင်းပညာ “ဘီးလူးမျက်စောင်း”
ko on September 26, 2011 at 8:56 pm said:
အင်မတန်အစွမ်းထက်တဲ့ အင်းတိုင်ကြီးတစ်ခုပါ ဒါကြောင့် ဗေဒ စည်းကမ်းတွေက အင်း ကစားရင်လိုကနာရမဲ့စည်းကမ်းတွေနဲ့ ဆင်ဆင်တူနေတာပေါ့ with respect
ဇေယျာမောင် on September 26, 2011 at 9:56 pm said:
ဆက်စပ်လို့ ရနိုင်တာတခု စဉ်းစားမိပါတယ်။
အာယုစန်းဗေဒင်မှာ ရတနာပုံနက္ခတ်ဆိုတာပါပါတယ်၊ ဆရာလည်းသိပြီးသားပါ။ ၇စားလို့အကြွင်းတူ၊ အဖွားတူပေမယ့် ရတနာပုံနက္ခတ်အရ ၁၂ရာသီခွင် ဓါတ်လေးပါးရာသီထဲ ကျသွားတာ မတူပါဘူး။ ဒီနှစ်၁၃၇၃မှာ ၁နွေသား အထွန်းဖွားဆိုရင် မီးဓါတ်ပိုင် မိဿရာသီထဲ ကျနေပါတယ်။ ၁၃၆၆မွေးတဲ့ ၁နွေသားဆိုရင် အထွန်းဖွားဖြစ်ပေမယ့် မြေဓါတ်ပိုင် မကာရရာသီထဲ ကျနေပါတယ်။ ကျန်တာတွေလည်းအတူတူပါပဲ မဟာဘုတ်ဖွားချင်းတူပေမယ့် ဓါတ်လေးပါးမတူပါဘူး။ ဒီနည်းနဲ့ မဟာဘုတ်မှာ ယူဆဟောပြောရမယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဆက်လက်ကြံစည်လေ့လာသင့်ပါတယ်။ မဟာဘုတ်ခွင်မှာ စတုရန်းကိန်းကို ဓါတ်လေးပါးအရ တည်ဆောက်ထားတယ်လို့ ပဲ ဖတ်မှတ်ဘူးပါတယ်။ မဟာဘုတ် ဘယ်အိမ်က ဘယ်ဓါတ်ပိုင်တယ်လိုတော့ ကျနော်လည်း လော့လာမိသလောက် မတွေ့ ဘူးသေးပါဘူး။
ဇေယျာမောင် on September 26, 2011 at 9:59 pm said:
Dr.Tin Bo Bo on September 27, 2011 at 8:17 am said:
ဆရာ ဇေယျာမောင် သို့
အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ဒီပို့စ်ဟာ ပညာရှင်တွေကို ဖိတ်ခေါ်ကြည့်တာပါ။ ဘယ်သူမှ တက်မလာလို့ နဲနဲတော့ စိတ်ပျက်မိတယ်။ အခု ဆရာဇေယျာမောင် ၀င်ရေးပေးလို့ အထူးဝမ်းမြောက်မိတယ်။ လေးစားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ ဒီအတိုင်းယူဆလိုက်ရင် “မဟာဘုတ်” ဟာ မြန်မာ့ဗေဒင်စစ်စစ် မဟုတ်တော့ဘဲ “ဟိန္ဒူ” စနစ်နဲ့ ရောယှက်သွားပြီး ၊ မဟာဘုတ်ဟာ “ဟိန္ဒူ” စနစ်ရဲ့ အဆွယ်အပွားဆိုတဲ့ စကားက မှန်သလို ဖြစ်သွားမယ်။ အာယုစန်းကို၌က မြန်မာ့ရိုးရာဗေဒင်စစ်စစ် မဟုတ်ဘဲ“ဟိန္ဒူ”ကို မြန်မာမှု ပြုထားတာ မဟုတ်လားဆရာ။ ဒါပေမယ့် ဆရာ ဒီလို တွေးတောကြံဆပေးတာကိုဘဲ ၀မ်းမြောက်လှပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ဆက်စဉ်းစား ကြည့်ကြကြရင် အဖြေမှန်က မဝေးနိုင်တော့ပါဘူး။ ကျေးဇူးအထူးပါဗျာ။
ငြိမ်း on September 27, 2011 at 10:15 am said:
ဗေဒင်နဲ့ ပတ်သက်တာတော့မသိဘူး။ ဝေါဟာရအရတော့ အဲဒီဦးလေးကြီးပြောတာ ထောက်ခံချင်တယ်ဆရာ။ ဘုတ်တေး ဆိုတာ ပြေးပြီးမှဆက်မပြေးနိုင်လို့ဘွာခတ်တဲ့သဘော။ ဘွာတေးပေါ့။ ဘွာကတော့ ဘိုသံကလာတာ မဟုတ်လောက်ဘူး ထင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ဝဝဖိုင့်ဖိုင့် လေးလေးပင်ပင်ဆိုရင် ဘုတ်ထိုင်းကြီးလို့ ခေါ်ကြတယ် မဟုတ်လား။ မလှုပ်နိုင်တဲ့ တိုင်လုံးကြီးလိုမျိူး ပြောချင်တာဟုတ်ဘူးလား။ ဘုတ်မရေ နင့်သွားပေး ငါ့သွားယူဆိုတာကရော အရင်ကတည်းက ရှိတယ်ထင်ပါတယ်။ စိုက်ထူတဲ့သဘောပါ။ ဒီပိုစ့်ရဲ့အဖြေကို စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ အစစ အရာရာ သူများယူတာခံနေရတဲ့ အချိန်ကြီးမှာ အဖိုးတန်ပညာ တစ်ရပ်ပါ လက်လွတ်စပယ်ပါသွားမှာ နှမျောစရာကြီး။
Dr.Tin Bo Bo on September 27, 2011 at 12:38 pm said:
အခုလို ထင်မြင်ချက်ပေးတာကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ပညာရှင်ဖြစ်မှ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်သူမဆို ထင်မြင်ချက် ပေးနိုင်ပါတယ်။ လက်ခံ ကြိုဆိုလျှက်ပါ။
zaw lat on October 2, 2011 at 8:49 am said:
Keep in research mind, put back old knowledge & ours. Small thyings used to became proper & right clue. Thank you everybody. With respect.
moegyichotoomandalay@gmail.com on May 20, 2012 at 4:44 pm said:
ဆရာ့့ ကျတော် ကမပာာဘုတ်တစ်ခုတည်းကို
လေ့လာနေဆဲပါ. ဆရာတို့ရဲ့ဒီဆိုက်လေးကို
အခုမှတွေ့ မိတာပါ လေ့လာခွင့်ရတဲ့ အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်. ကျတော်ထင်တာလေးတစ်ခုကိုပြောပရစေ ဆရာ
လေးလေးသောင်းတင် ပြောတဲ့ဘုတ်တေး. ဆို
ပြီးပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ် နဲ့မပာာဘုတ်
ပာာ ဓာတ်ကြီးလေးပါး နဲ့ဖွဲ့ စည်းထားတယ် ဆိုတဲ့ 
အဓိပ္ပာယ် အဲဒီအတွေးနှစ်ခုစလုံးပာာ. နစ်ခုစလုံးပာာ
မှန်ဖို့ ရာခိုင်နူန်း ၉၉% လို့ကျနော်ထင်လို့ပါဆရာ
မပာာဘုတ်ကို ကြီးကျယ်ခမ်းနားမူ့ ဘုတ်တိုင်လို့ဆိုချင်
သလိုမပာာဘုတ်ကို လူသား တစ်ယောက်အဖြစ်
လည်းမြင်ပါတယ် မပာာဘုတ်ရဲ့ အဓိပတိအိမ်ကို လူ
ရဲ့ ဦးခေါင်း၊အထွန်း အိမ်က လူရဲ့ ညာဘက်လက်ပေါ့၊ရာဇအိမ်ကိုတော့ဖြင့် လူရဲ့ဘယ်ဘက်လက်ပေါ့၊သိုက် အိမ်
ကြှိုဖင့် လူရဲ့ အစာအိမ်၊မရဏ အိမ်ကလူရဲ့ ညာခြေထောက်
ပုတိအိမ်က လူရဲ့ဘယ်ခြေထောက်၊ဘင်္ဂအိမ် က လူရဲ့
ဖိုမအင်္ဂါလို့ မြင်ပါတယ်ဆရာ. လူကလည်းဓတ်ကြီးလေး
ပါးနဲ့ ဖွဲ့ စည်းထားပါတယ်ဆရာ. ကျတော် သိထားတဲ့ 
ပညာနည်းနည်းလေးနဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပောာပေးတဲ့ အ
ခါ ၆ကြွင်း ယောကျာင်္း ၊၃ကြွင်းမိန်းကလေးများနဲ့ တွေ့ 
တဲ့ အခါ အချစ်ရေး အိမ်ထောင်ရေး ဆွေးမျိုး စသည်
တို့၌ ညံ့ တယ် ရှားပါးတယ် ခက်ခဲတယ်လို့ပဲ ပောာ
မိပါတယ် ဆရာ. ။ဘင်္ဂအိမ်
က လူရဲ့ဖိုမ ဆိုရင် ကျိုးပျက်ခြင်းလိ့ုဖွင့် ဆိုထားတဲ့ 
ဘင်္ဂအိမ်မှာ၃ ၊ ၆ရှိနေလို့ ပောာမိတာပါဆရာ ။အမှားပါ
ရင်ခွင့်လွှတ်ပါ. သင်ပေးပါ ဆရာ။ဆရာရဲ့ သုံးထပ်မပာာ
# လျှပ်တစ်ပြက်ဗေဒင် (57,765)# 2012 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (46,987)# 2013 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (46,831)# မွေးနေ့ဗေဒင် တွက်ကြမယ် (၁) (31,378)# အလွယ်ဆုံး ဗေဒင်မေးနည်း (23,449)# (3)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (14,585)# (4)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (12,607)# (8)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (11,970)# (9)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (11,303)# ဧပြီလ (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင် (10,273)# ဧပြီလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (10,105)# ဒီဇင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (10,051)# မဟာဘုတ် စစ်တမ်း (9,843)# နာမည်သည် နောက်ဆုံးအဖြေလော? (9,806)# နဂါးနှစ် လာပြီ (9,304)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၂) (9,137)# သြဂုတ်လအတွက် သင်္ချာဗေဒ ဟောကိန်းများ (8,835)# အပြောင်းအလဲ များတတ်တဲ့သူ (8,503)# အောက်တိုဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (8,186)# (1)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (8,182)# အောက်တိုဘာလ (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (7,829)# နိုဝင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (7,683)# မွေးနေ့ဗေဒင်တွက်ကြမယ် (၂) (7,643)# မတ်လ (၇)ရက် သားသမီး ဗေဒင် (7,554)# စက်တင်ဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (7,263)# (၀)ကြွင်း မဟာဘုတ် ဖွား များ၏ ယေဘူယျဝိသေသ လက္ခဏာများ (7,245)# မွေးနေ့ မွေးရက် ထပ်တူကျခဲ့လျှင် . . . (6,909)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၁) (6,696)# (၇)ရက်သားသမီးများအတွက် သြဂုတ်လ ဟောကိန်းများ (6,482)# စကား (၆) ခွန်း လူ၌ထွန်း (6,027)	အားပေးတယ်ဆို Like လုပ်ခဲ့နော် !